I-MIRAFLORES FULL PRIVATE STUDIO YEZIhambeli ezi-2 2
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Victor
Lesi Situdiyo sokungena esizimele esizimele esinekhishi eligcwele kanye negumbi lokugezela langasese sisitezi sokuqala sendlu enhle ye-Art Deco e-Miraflores, idolobha lezivakashi eliphephe kunazo zonke ePeru. Izinga eliyisisekelo lihlanganisa umthamo wezivakashi ezingafika kwezi-2 embhedeni ogcwele-Imali yokuhlanza ifakiwe nayo ngakho-ke uma Uphuma awudingi ukukhathazeka nganoma yini-Iningi elihehayo lingaphakathi kwebanga lokuhamba Uma ufuna ukuzwa ukuthi ungaphila kanjani. e-Lima, usendaweni efanele-IT'S A 5 STARS PRIME LOCATION.
Yindlu enhle ye-Artdeco engayimodela Kabusha futhi Ngayihlobisa Kabusha (AKUYONA INDLU YOMNDENI)
ISITEZI SOKUQALA SIZIMELE NGOKUPHELELE NGAAMAGUMBI AMA-4 ANENDAWO YOKUNGENA OKUNGEMPELA, ONAKHO LOKHU KULANDELAYO:
IGUMBI #1 ILOBHI: Udonga oluhlotshiswe kahle ngamatshe, izibuko, osofa be-Mah Jong, umbhede ongusofa ongu-1 kanye nebhavu elingu-½.
IGUMBI #2 IGUMBI LOKUDLA LOKUDLA UMHLANGANO: Inetafula labantu abangu-8, osofa be-Mah-Jong abangu-2, ibhodi eseceleni eliphakathi nendawo elinomshini wekhofi, izitsha zasekuseni kanye nezinto zokusika zabantu abayi-15 (asikunikezeli ibhulakufesi) I-Air Conditioner, I-heater, i-TV ene IDirectv kanye nomshini wokuwasha okhokhelwayo.
IGUMBI #3 IGUMBI LOKUDLALELA: elinendawo yokungena ezimele, umbhede ongu-1 ogcwele, imibhede yodonga eyodwa engu-2, igumbi lokugezela eligcwele, ikhabethe kanye ne-Led TV ene-DIRECTV (ingalala abantu abangu-4)
IGUMBI #4 IKHISHI: Ikhishi elihlome ngokuphelele elineziqandisi ezi-2, isitofu esinohhavini, umshini wokuwasha izitsha, indawo yokubala yabantu abangu-5, ikhawunta nezitsha ziphelele abantu abayi-17.
ISIFINYEZO: Abantu abadala abangu-4 bangalala ngokunethezeka kuleli gumbi lesitezi sokuqala, ngaphezu kwalokho, line-Wifi, amathawula, insimbi, imishini yokuwasha ekhokhayo, okomisa izinwele. Uma kwenzeka udinga indawo yezivakashi ezengeziwe; singanikeza AMAGUMBI ENGEZIWE angu-2 ESIsitezi ESIFANAYO kanye neSitudiyo esisodwa esengeziwe kanye namakamelo angu-4 efulethini lesitezi sesibili (ngalinye linendlu yalo yokugezela) elingahlalisa ezinye izivakashi ezingu-14. Sicela ucele ukutholakala.
INDAWO: 258 Tarata Street, Miraflores:
I-Miraflores iyidolobha lezivakashi eliphephe kunazo zonke lasePeru; 100 metres around our block uzothola okulandelayo: 4, 5 star hotels, 6 Hostels, 12 restaurants, 4 Pharmacy, 6 Banks, 3 Casinos, 2 Supermarkets, 3 Money Exchange offices, s stops and taxis, at 2 blocks is Kennedy I-Park and Discos, e-6 Larcomar Mall, i-Pacific Ocean, amabhishi nezikole ze-paragliding, eDolobheni lami lase-Miraflores ungazizwa uphephile ukuhamba futhi ujabule usuku lonke nobusuku ngaphandle kokwesaba, (YINDAWO EYIZINKANYEZI EZI-5)
4.75 ·321 okushiwo abanye
4.75 out of 5 stars from 321 reviews
4.75 · 321 okushiwo abanye
Umsingathi onobungane. Ngibuyela ePeru eminyakeni engu-4 edlule ngemva kweminyaka engu-25 (ngihlala iminyaka engu-17 eCalifornia kanye nengu-8 ePanama) Ngingumklami wobucwebe we-"Sea Glass" (olwandle oludiliziwe). Ukwengeza, ngenza amalambu esitayela sika-Tiffany nezithombe zedijithali ngamapensela anemibala, futhi ngakha i-Eco Domes. Isitudiyo sami sobucwebe nekhaya kusesitezi sesi-3; lapho nginengadi yezithelo eqondile eyenziwe ngamabhodlela e-PET..
Uma unombuzo, sicela ungangabazi ukubuza. Ngingajabula ukuyiphendula noma nini!!!
Umsingathi onobungane. Ngibuyela ePeru eminyakeni engu-4 edlule ngemva kweminyaka engu-25 (ngihlala iminyaka engu-17 eCalifornia kanye nengu-8 ePanama) Ngingumklami wobucwebe we-"S…